“Mareykanku waa yimaadeen aniga ayeyna ii socdaan, adiga kuma rabaan” Xaaska Bin Laden oo ka sheekeysay wixii dhacay habeenkii la dilay | Entertainment and News Site
Home » News » “Mareykanku waa yimaadeen aniga ayeyna ii socdaan, adiga kuma rabaan” Xaaska Bin Laden oo ka sheekeysay wixii dhacay habeenkii la dilay
“Mareykanku waa yimaadeen aniga ayeyna ii socdaan, adiga kuma rabaan” Xaaska Bin Laden oo ka sheekeysay wixii dhacay habeenkii la dilay
daajis.com:- waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa warbixin ku saabsan xaaska Obama Bin ladon oo ka sheekeysay qaabkii odaygeeda loo dilay, waxaana soo turjunay warbixin dheer oo uu ka diyaariyey wargeyska Daily Mail ee laga leeyahay dalka Ingiriiska.
QODOBADA UGU MUHIIMSAN SHEEKADA
Maskaxdii Argagixisada Osama bin Laden ayaa wuxuu habeenkaas la joogay xaaskiisa ugu yar Amal bin Laden iyo caruurtooda, waxayna joogeen guri ku yaalla dalka Pakistan.
Bin Laden waxaa la dilay 2011kii, waxaana dilay Ciidanka Mareykanka ah ee SEAL, iyagoo ku dilay qol ay xaaskiisu kula jirtay.
Amal ayaa sharraxaad ka bixisay sida iyada iyo wiilkeeda yar Hussein ay u arkayeen seygeeda oo la dilayo.
Qoyska Osama bin Laden ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dilkii ay Millateriga USA u geysteen aasaasihii Uruka al-Qaeda, kaasoo sidoo kale ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii 11kii September 2001dii, inta badan waxay ka sheekeeyeen waxa ay dareemeen markii ay arkeen iyadoo la tooganayo Osama bin Laden.
Amal bin Laden, oo aheyd xaaska afaraad ahna gabadha ugu yar ee dhaxday ninkaan ugu sarreeyey liiska dadka ay raadinayeen Sirdoonka Mareykanku muddo tobaneeyo sanno ah, ayaa waxay si gaar ah uga sheekeysay xusuusta ay ka heysato habeenkaas uu seygeedii ku dhintay gacmaha ciidanka SEAL Special Forces.
Osama bin Laden, Amal bin Laden iyo lixdooda caruurta ah ayaa waxay ku noolaayeen guri amni ah, cidna aysan ka warqabin inay halkaas ku nool yihiin, oo ku yaalla magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan, markii la dilayey bin Ladin 2dii bishii May sanandkii 2011kii.
Gabadhaan lagu magacaabo Amal bin Laden ayaana wax walba oo dhacay habeenkaas uga sheekeysay buugga loogu magac daray The Exile: The Flight of Osama bin Laden, kaasoo ay qoreen Cathy Scott-Clarke iyo Adrian Levy isla markaana lagu daabaco majaladda Sunday Times UK.
Si la mid ah Amal bin Laden iyo caruurteeda, waxaa gurigaas kula noolaa xaaska labaad ee bin Laden gabadha lagu magacaabo Khairiah, xaaskiisa seddaxaad Seham iyo wiilkiisa 22 sanno jirka ah Khalid.
Xaaskiisii ugu horreeyey Najwa oo guursatay iyadoo dhallinyaro ah una dhashay 11 caruur ah, ayaa ka tagtay seygeeda ka hor inta uusan weerarkaani dhicin.
Saacaddu waxay ku beegneyd shan saac (11pm) oo habeennimo, casho iyo salad ka dib, bin Laden wuxuu u jiiftay si dhaqsi ah, xaaskiisa afaraad Amal bin Laden ayaana hareer jiiftay.
Bannaanka guriga ayaa mugdi ahaa, waxaana u sabab aheyd koronto la’aan, waana arrin caan ka ah magaalada Abbottabad, laakiin Amal waxay daaha ka qaaday inay habeenkaas walwal gaar ah dareentay mugdiga awgiis.
Amal bin Laden ayaa daaha ka qaaday inay maqashay shanqarta kobaha ciidanka, ka dibna ay eegtay daaqadda markaasoo ay dhaqdhaqaaqa dareentay.
Wixii intaas ka dambeeyey Bin Laden ayaa jiifka kasoo kacay, wuxuuna arkay Ciidanka SEAL Special Forces oo isku hareer kasta ka taagan guriga.
Bin Laden wuxuu yiri, sida laga soo xigtay xaaskiisa afaraad Amal bin Laden: “Ciidanka Mareykanka ayaa soo socda”. – Waxay aheyd baaq uu u dirayo qoyska oo dhan, ka dibna Ciidanka SEAL Special Forces ayaa dhankasta isaga yeertay iyadoo rasaas guriga lagu furay.
Markii ay rasaastu bilaabatay, labadooda ayaa gacanta isqabsaday waxayna raadsadeen meel ay ku gambadaan. Amal oo xusuusaneysa wixii markaas dhacay waxay tiri: “Wuxuu ahaa habeen gudcur ah, waxaana nagu adkaatay inaan wax aragno”.
Laba diyaarad oo kuwa qumaatiga u duula ah iyo 24 askari oo si gaar ah u tababaran ayaa habeenkaas oo weeraray guriga Bin Laden. Sida ay sheegtay xaaskiisa labaadna waxaa biyaanada labaad ee gurigaan ku jiray Seham iyo Khalid kuwaasoo arki karay weerarka ay Ciidanka Mareykanku kusoo qaadeen Bin Laden.
Bin Laden ayaa u yeeray wiilkiisa si uu ugu yimaado, kaasoo xirnaa bijaano ama dharka lagu jiifto wuxuuna Khalid usoo qaaday aabihiis qori nuuca AK-47 ah, inkastoo ay Amal ka warqabtay in uusan wiilkaani xabad ridin tan iyo 13 sanno jirkiisii.
Amal iyo Seham ayaa ka dib aaday dhanka caruurtooda si ay u aamusiyaan maadaama ay barooranayeen. Waxayna waxayna xambaareen intii itaalka yareyd halka kuwa kale ay gacanta qabteen si ay meel badbaado ah guriga uga raadsadaan.
Markii ay maqleen sida ay Ciidanka USA ee sida gaarka ah u tababaran usoo jebiyeen albaabka guriga, ka dib waxaa xiggay qeylada bin Laden kaasoo ku yiri qoyskiisa: “Aniga ayey i doonayaan ma ahan adinka.” – Sababta uu baaqaas ugu dirayo ayaana aheyd inay hoos u degaan.
Laakiin gabdhihiisa waa weyn Miriam iyo Sumaiya ayaa saarnaa dabaqa sarre halka Seham iyo wiilkiisa Khalid ay hoos u degayeen. Amal waxay daaha ka qaaday inay aaminsan tahay inuu qof ka mid ah qoyskooda khiyaamay isla markaana uu wax walba kala soo shaqeeyey Ciidanka USA.
Mid ka mid ah Ciidanka SEAL Special Forces, oo ku hadla Afka Carabiga ayaa wuxuu toogtay Khalid Bin Laden, maadaama uu u fahmay sida shaqsi u yeeray oo kale, sida ay daaha ka qaaday Amal. Iyadoo gabadhaha Sumaiya iyo Miriam ayaa isku deyey inay goobta ka baxsadaan laakiin waxaa isku horgooyey isla ninkii ku hadlayey Afka Carabiga.
Robert O’Neill oo ahaa hogaamiyaha Ciidanka SEAL ayaa wuxuu aaday qolkii uu ku jiray Bin Laden, iyadoo Amal ay hor istaagtay si ay ninkeeda u difaacdo, laakiin shaqsi kale ayaa rasaas kusoo riday, iyadoo sidaas SEAL ay qolka ku galeen. Amal oo xaaladdaas xusuusaneysa ayaana sheegtay inay xanuun badan dareentay oo dhanka lugaha u badan ka hor inta aysan sariirta ku dhicin.
O’Neill oo ahaa shaqsigii toogtay Bin Laden, oo dhacdadaas ka hadlaya ayaana yiri: “Markii aan ku dhuftay xabadda hore ayaan dareemay inuu dhimanayo”.
Amal oo habeenkaas dhaawacantay ayaana tilmaantay inay niyadda gashatay inay dhiman doonto sidaas darteed ay indhaha xiratay iyadoo isku deyeysa in aysan neefsan si aysan ciidanka SEAL u dhammeystirin.
Markii hore gabadha Bin Laden ee Miriam ayaa magaca qaldan sheegtay, laakiin Sumaiya ayaa ku dhahday: “U sheeg runta, kuwaani ma ahan ciidan Pakistan ah”. Ka dibna Miriam ayaa ku qeylisay: “Kani waa aabaheey, waana Osama bin Laden”.
Hussein bin Laden oo ah wiilka ugu yar ee uu dhalay oo habeenkaas arkayey aabihiis oo la dilayo, ka dibna Meydkiisa ay qaadanayaan Ciidanka SEAL ayaa wacad inuu ka aarsan doono Mareykanka.